Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Liverpool Emre Can oo seegaya kulanka Middlesbrough – Gool FM
Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Liverpool Emre Can oo seegaya kulanka Middlesbrough
Haaruun December 12, 2016
(Liverpool) 12 Dis 2016 – Tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa xaqiijiyey in Emre Can uu dhaawac ku seegi doono kulanka Arbacada ee Premier League oo ay Riverside Stadium kula leeyihiin naadiga Middlesbrough.
Xiddigan khadka dhexe ayaan qeyb ka ahayn shaxdii barbaraha 2-2 Axaddii la galay West Ham United, isagoo aan ka mid noqon doonin ciyaaryahannada safraya todobaadkan sababo la xiriira dhaawac jilibka ah oo uu qabo.
Can ayaa la dhibtoonaya dhaawac jilibka ka soo gaaray kaddib markii ay isku dhaceen xiddiga ay isku kooxda yihiin ee Divock Origi intii lagu guda jiray tababarka, laakiin waxa uu safka kooxda dib ugu soo laaban karaa kulanka Merseyside derby ee ay wajahayaan Everton.
“Emre waxa uu ku dhaawacmay tababarka markii ay isku dhaceen Divock, waa dhaawac jilibka ah” ayuu Klopp u sheegay suxufiyiinta.
“Labaduba waa ay ka nasteen tababarka, laakiin Emre ayaa xanuun dheeraad ah dareemayey.
“Shaki ayaa ku jira kulanka Arbacada, laakiin waxaan u malaynayaa inuu dib u soo laaban doono kulanka Everton, waxa uu dareemayaa xanuun, laakiin wax badan ma’ahan.”
TOOS u daawo: Abaal marinta Ballon d'Or 2016 - LIVE
Macallinka Man United ee Jose Mourinho oo tilmaamay in Wayne Rooney uusan ku bilaaban doonin kulanka Crystal Palace